Ambondromamy Tratra ny iray tamin’ireo jiolahy nidaroka ireo telo mianaka
Ny iray tamin’ireo jiolahy efatra izay nandratra azy telo mianaka tao Ambondromamy no efa tra-tehaka, raha ny fampitam-baovaon’ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena ao Ambondromamy.
Famatsiana zava-mahadomelina an’Antananarivo sy Mahajanga Mandeha an-tongotra herinandro ireo mpiantoka rongony
Fito andro maninjitra no fandehanan’ireo mpivarotra rongony an-tongotra.
na FIP any an-toerana noho ny resaka fanamboarana basy vita gasy. Andro maromaro talohan’io dia nahazo loharanom-baovao ny FIP fa misy lehilahy iray mpanamboatra sy mivarotra fitaovam-piadiana any amin’iny faritra iny . Natao ny fanarahan-dia ka tra-tehaka tao Tsimenatra II ilay tovolahy voalaza fa tompon’antoka amin’izany. Mbola tratra tao aminy ihany koa ny basy poleta vita gasy sy basy lava maromaro miaraka amin’ireo bala ana basim-borona miisa 4, «revolver», «pistolet automatique», bala maromaro, «matrices fanamboarana «cross métallique». Fantatra ihany koa fa ity lehilahy ity dia ahiana ho anisan’ireo mpamatsy basy lava an’ireo dahalo any an-toerana. Natolotra ny Police judiciaire ao Toliara avy hatrany hanohizana ny fanadihadiana.